I-Villa Soghetta uhlobo lwe-S3 - I-Airbnb
I-Villa Soghetta uhlobo lwe-S3
Ifulethi elinama-m² angama-65 endlini enezindlu zamaholide ezi-4 ezitholakala ngqo echibini. Ifulethi lingaphezulu kwesokunxele futhi linikeza umbono omuhle wechibi nezintaba. Engadini kukhona ithala elinetafula lokudlela nezihlalo zompheme. Engadini enkulu kukhona ichibi elincane (6mx3mx0.55m), ithala lelanga kanye ne-grill.
Amakamelo okulala ama-2, igumbi lokuhlala, igumbi lokugezela elinobhavu wokugeza, ikhishi elihlome ngokuphelele elinesitofu segesi (amalangabi ama-4), isiqandisi esinefriji, ihhavini, umshini wekhofi wokuhlunga, umshini wokuwasha, i-TV yesathelayithi enezinhlelo zamaJalimane, ukufinyelela kwe-WiFi yamahhala, i-balcony, ithala elisegumbini lokuphumula. ingadi enetafula, izihlalo kanye ne-parasol
I-Villa Soghetta isendaweni enhle ekugcineni kwendawo eyimfihlo ye-de-sac echibini. Inkundla yokudlala yezingane, indawo yokuphuzela utshwala, izindawo zokudlela ezinhlobonhlobo nezitolo zegrosa zingaphakathi kwebanga lokuhamba ngezinyawo. Ukuqwala izintaba kungaqalwa usuka ngqo endlini, isikole sama-surf siqhelelene nje nemakethe yaso yamasonto onke, eyenzeka njalo ngoLwesithathu, singafinyelelwa nge-promenade egudle ichibi.
Sihlala esizeni futhi sihlala sitholakala ngemibuzo noma izicelo.